Amerika Avaratra · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Novambra, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Novambra 2011
Etazonia20 Novambra 2011
Ny marainan'ny 15 Novambra, Ireo mponina avy ao Etazonia dia taitra tamin'ilay vaovao nilaza fa ny polisy dia nandroaka ireo mpanao hetsi-panoherana bodoy ny "Wall Street" ao amin'ny Zuccotti Park tsy nisy fampandrenesana mialoha akory. Toy ny mahazatra, betsaka ny hevitra izay nifamahofaho tao amin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tambazotra...
Shina: Fahavalo An'eritreritr'i Japana
Azia Atsinanana16 Novambra 2011
Tatitra vao haingana avy amin'ireo mpampita vaovao Japone izay manondro an'i Shina ho ny fahavalo ao anatin'ilay fanazarantena an-dranomasina iarahan'i Japana sy Etazonia izay voalaza fa nokarakaraina hatao amin'ity herinandro ity no nitondra hatramin'ny fihenjanana amin'ny resaka ady sisintany eo amin'ireto firenena aziatika roa ireto. John Kennedy no mitatitra.
Taiwan: Maneho Hevitra Momba Ilay Diplaomaty Voaheloka Ho Nanararaotra Mpiasa An-trano Ireo Mpiondana Aterineto
Azia Atsinanana13 Novambra 2011
Noho ireo mpanao lalàna mitavozavoza sy motraka, ary ny "sasany"- sa tokony hoe "ny maro" no ho teneniko - amin'ireo mpampiasa tsy vanon-toetra, malaza ratsy amin'ny fanaovana tsinontsinona ireo mpiasa vahiny mpila ravinahitra i Taiwan. Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity ny tantara ratsy mahasadaikatra dia tsy tao Taiwan...
Hong Kong : Maninona No Bodoina Ny “Foibe”?
Azia Atsinanana10 Novambra 2011
Vondrona iray misy ireo mafàna fo ao Hong Kong no nibàhana ny rihana ambany amin'ilay trano avo lehibe malaza atao hoe HSBC tao amin'ny Distrika Foibe efa ho herinandro. Ilay fibodoana dia nanome toerana hisainana ho an'ny olona mba hijereny ny olana misy eo amin'ny sehatra ara-toekarena.
Sarimihetsika: Andro Iray Hiainana Ny Fiainan'ny Olona Iray Jamba
Etazonia03 Novambra 2011
Jamba hatrany an-kibon-dreny i Tommy Edison, ary amin'ny alàlan'ny lahatsary YouTube no anehoany amintsika ny fiatrehany ireo asa aman-draharaha sasantsasany izay mitaky fanamby avy aminy toy ny fampiasàna vola taratasy ohatra, ATM, famakiana DVD sy fiampitàna arabe. Izy koa dia mpanao kiana amin'ny sarimihetsika ary ny fomba fijeriny miharo vazivazy...